ယခုနှစ် အာဆီယံ ၁၀၀ ခေါင်းဆောင်မှုဖိုရမ်ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နှင့် ၆ ရက်များ တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် ဖိုရမ်၏ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်မှာ “Turbulent World. Rising Asia. Where do we go from here?” ဖြစ်သည်။
ယူကေ တွင် MBA သင်ယူလိုသူများအတွက် လက်တွေ့အလုပ်အကိုင် နေရာချထားပေးမူ့အပြင်လ စာပါရရှိ်မည့် အစီအစဉ်ပါရှိသော MBA+ Business Placement ကို University of Portsmouth တွင်
လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများ စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပညာေ ရး ၀န်ဆောင်မှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက သိရသည်။
Windows7ကို လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် အချက် ခုနစ်ချက်
Windows7ကို အသုံးပြု နေသူများ အတွက် Windows7ကို လျင်မြန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ရရှိ နိုင်စေရန် အတွက် အွန်လိုင်းတွင် ဝေမျှထားသည့် အချက် ခုနစ်ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါသည်။
Window7ကို လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်း
Window7ကိုလျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲ အသုံးပြု နိုင်ရန်အတွက် minimize- maximize Animation များကို disable လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Disable ပြုလုပ်နည်းမှာ Run Box ကနေ System Properties Performance ဟု ရိုက်ပြီး Visual Effects Tab တွင် Animate windows when minimizing and maximizing ကို uncheck လုပ်ကာ OK နှိပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
နောင်ချိုမြို့ လွယ်ခေါ် ရွာအနီးတွင် ထော်လာ ဂျီယာဉ် ဘရိတ်ပေါက် တိမ်းမှောက် လူ(၃)ဦး သေဆုံး
ရှမ်းပြည်နယ် နောင်ချိုမြို့ လွယ်ခေါ်ရွာ အနီးတွင် အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ခွဲ က ယာဉ် တိမ်း မှောက် မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အရေပြားကင်ဆာအတွက် မစားသင့်သော အစားအစာခုနစ်မျိုး
သင့်အရေပြားကို အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေ ရှိသလိုပဲ၊ အရေပြားကင်ဆာ အတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အစားအစာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ကင်ထား၊ ဖုတ်ထားသော အစာများ
ကင်ထားဖုတ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေက ကျန်းမာတဲ့ အရေပြား ဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးတတ်တာကြောင့်ပါ။ ကြက်သား၊ ဝက်သားနဲ့ အမဲသားတွေ ကို သေချာ ချက်ပြုတ်ပြီး စားပေးဖို့ အမေရိကန် ကင်ဆာရောဂါဌာနက အကြံပြုထားပါတယ်။ ဆဲလ်မွန်ငါးက သင့်ကျန်း မာရေး ကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အိုမီဂါသရီးဖက်တီးအက်စစ်တွေ ပါဝင်တယ်ဆိုပေမယ့် ကင်စားမယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုပိုပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါးကိုလည်း ချက်ပြုတ် စားသောက် ပါ။
ဆူရင်ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေး အဆိုပြုချက်ကို ပယ်ချလိုက်တာ မှန်တယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခမှာ မြန်မာ-အာဆီယံနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ သုံးပွင့် ဆိုင် ဆွေးနွေးကြဖို့ အာဆီယံ အ တွင်းရေး မှူး ဆူရင် ပစ်ဆူဝမ် (Surin Pitsuwan) က အဆိုပြု လာပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာအစိုးရက ပယ်ချ လိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ပယ်ချလိုက်တာ ဟာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရပါ မယ်။
ရခိုင်တွင် ပေါ်ပေါက်နေသော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူများကြောင့် မြန်မာ- ဘင်္ဂလာနယ် စပ် ပင်လယ်ပြင် တွင် နှစ်ဘက် နိုင်ငံ၏ ရေတပ် သင်္ဘောများကို တိုးချကာ လုံခြုံရေး မြှင့်တင် ထားကြောင်း သတင်း ရရှိ သည်။
﻿ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၃ သိန်းကျော်ထပ်မံတောင်းခံထားပြီး စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ကျပ်သန်းပေါင်း ငါးသိန်းကျော်ဖြင့် အများဆုံး တောင်းခံထားကြောင်းသိရ
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မူလခွင့်ပြုငွေဖြင့်မလုံလောက် သဖြင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့်ဌာနအဖွဲ့ အစည်းများမှ ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၃ သိန်းကျော် ထပ်မံတောင်းခံထားပြီး စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ငွေလုံငွေရင်း အသုံး စရိတ်အဖြစ် ကျပ် ၅၀၆၅၂၂.၅၆၇ သန်းဖြင့် အများဆုံးတောင်းခံထားကြောင်း သိရသည်။
ဆောင်းရောက်သည့် အခါ ဖြစ်တတ်သည့် ဗောက်ထခြင်း (Dandruff) ......
ဆေးဖက်ဝင် ဗောက်ပျောက်ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဦးရေပြားနဲ့ ဆံပင်မှာ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင် အဖတ်လေးေ တွ ကို တွေ့ရရင် ဒါမှမဟုတ် ပခုံးပေါ်မှာ အဖြူဖတ်၊ အဖြူမှုန့် လေးတွေ ကို တွေ့ရ ရင် ခေါင်း မှာ ဗောက် ထနေပါပြီ။ အလွန်ခြောက်သွေ့တဲ့ ဆံသားရှိသူနဲ့ အဆီပြန်တဲ့ ဆံသားရှိသူတွေ မှာ ဗောက်ထလေ့ရှိပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများတာဟာလည်း ဗောက်ထ နိုင်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု အမည်ပြောင်းရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက သဝဏ်လွှာ ပေးပို့
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး သို့ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်၊ ရက် စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု အမည်ပြောင်းရန် ယနေ့တွင် သဝဏ်လွှာ တစ်စောင် ပေးပို့ လိုက်ေ ကြာင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
၂၅ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံကို ချေးငွေနှင့် အထောက်အပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၂၄၅ သန်းပေးရန် စီစဉ်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ၂၅ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို ချေးငွေနှင့်အထောက်အပံ့ငွေ အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၂၄၅ သန်း ထုတ်ပေးသွားရန် စီစဉ်ထားသည် ဟု နိုင်ငံတကာသတင်းဌာန များတွင် ဖော်ပြ ချက် အရ သိရသည်။
အိုက်စလန် သမ္မတ နိုင်ငံနှင့် သံအဆက်အသွယ် ထူထောင်ရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က သဘောတူညီ
နေတိုးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ စက်မှုဖွံဖြိုး တိုးတက်သော အိုက်စလန် သမ္မတ နိုင်ငံနှင့် သံတမန် ဆက်သွယ်ရေး ထူထောင်ရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်သူ မရှိဘဲ ယနေ့ အစည်းအဝေးတွင် သဘောတူညီလိုက်ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲခဲ့ ချိန်မှ စ၍ ရုရှား နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များ စီးနင်းခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားဖြစ် ကျည်ကာ ကားများ အစား ပြည်တွင်းဖြစ် ကားများကို အသုံးပြုရန် သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်က ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်။
ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ အတွက် ပေါင်၂ သန်း ဗြိတိန် ကူညီ ထောက်ပံ့မည်
ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော ရခိုင် ဒေသရှိ ဒုက္ခသည် များအတွက် ဗြိတိန် နိုင်ငံမှ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီ အဖြစ် ပေါင်၂ သန်း ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဘီဘီစီ သတင်း တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
ဂရိ သတင်းသမား ပြန်လွတ်
ဂရိ မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ တယောက်ကို အခွန်ရှောင်တယ်လို့သင်္ကာ မကင်းသူ တွေရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက် အလက်တွေကို ဖွင့်ချမှုနဲ့တရားစွဲ ထားတာကနေ ပြန်ရုပ်သိမ်း လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်မှာ ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်ထားတဲ့ ဂရိ လူမျိုး ၂ ထောင် ရဲ့ စာရင်း ကို ကော့စတပ် ဗက်စီ ဗန်းနစ် က ဖွင့်ချ ခဲ့ရာမှာ ဝန်ကြီးဟောင်း တယောက်လဲ ပါနေပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အရှေ့ခြမ်းမှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ အားပြင်းဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း Sandy ဒဏ်ခံ ခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေ အတွက် အချိန်ပေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမား Barack Obama ဟာ မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြန်အရွေးခံရဖို့ မဲဆွယ် ပွဲတွေ ပြန် လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်ပေါ် အနေအထိုင် မတတ်သော ပြည်ပ ဧည့်များကို ယခင်ထက် ပိုကြပ်မတ်မည်
ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်ပေါ်တွင် ပြည်ပ ဧည့်စုံတွဲများ မဖွယ်မရာပြုမူ နေထိုင်မှုများမရှိအောင် ယခင်ထက် ပိုမိုကြပ်မတ် သွားမည်ဟု ဂေါပကအဖွဲ့ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးဝင်းကြိုင်က ပြောသည်။ ယခုလအတွင်း အင်တာ နက်ပေါ် တွင် ပျံ့နှံ့လာသော ရင်ပြင်ပေါ်တွင် ပြည်ပဧည့်နှစ်ဦး လှဲအိပ်နေသော ဓာတ်ပုံနှင့် ပတ်သက် ၍ မေးမြန်းမှုကို ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“Facebook က ဓာတ်ပုံရဲ့ တည်နေရာကို ကြည့်တဲ့အခါ ရင်ပြင်တော် အနောက်မြောက် ဘက် အော င်မြေ ဖြစ်နေတယ်။
အွန်လိုင်းမှ ဈေးဝယ်နိုင်မည့် ရတနာပုံ Debit ကတ် ထုတ်လုပ်မည်
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အွန်လိုင်းတွင် ဈေးဝယ်ယူနိုင်မည့် ရတနာပုံ Debit ကတ် ထုတ် လုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရတနာပုံကုမ္ပဏီ လီမိတက် စီမံကိန်းများ တည်ေ ဆာက်ရေး ဌာနကြီး၏ ဌာနမှူးဦးအောင်စံမြတ်က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ တက္ကသိုလ် များနှင့် အချက်အလက် များ ဖြန့်ဖြူး နိုင်ရန် အတွက် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက် တည်ထောင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ တင်ထွန်းက ပြောကြားသည်။
အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကို နေလုံ၊ မိုးလုံ ပြုလုပ်မည်
အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ယာဉ် ရပ်နားကွင်း ကို ခရီးသည် များ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စေရန် အမိုး မိုး ၍ ဆောက်လုပ် သွားမည် ဟု ယင်း ယာဉ်ရပ်နား စခန်း စည်ပင်သာယာ ဌာနမှ ဒုတိယ ဌာနမှူး ဦးဉာဏ်ထွန်းအောင် က ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကို သမ္မတ၏တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ထားရှိရန်စီစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကို သီးခြားလွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရန် စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ဘဏ်စနစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ထိုသို့ပြောင်းလဲ ရန်စီ စဉ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယခုနှစ် အာဆီယံ ၁၀၀ ခေါင်းဆောင်မှုဖိုရမ်ကို ရန်ကုန်ြ...
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် MBA + Business Placement အစီအစဥ...
Windows7ကို လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် အချက် ...
နောင်ချိုမြို့ လွယ်ခေါ် ရွာအနီးတွင် ထော်လာ ဂျီယာဉ် ...
ဆူရင်ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေး အဆိုပြုချက်ကို...
﻿ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာနအဖွ...
ဆောင်းရောက်သည့် အခါ ဖြစ်တတ်သည့် ဗောက်ထခြင်း (Dandr...
ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု အမည်ပြောင်းရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတရ...
၂၅ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံ...
အိုက်စလန် သမ္မတ နိုင်ငံနှင့် သံအဆက်အသွယ် ထူထောင်ရန်...
ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင် ပြည်တွင်းဖြစ် ကားများကို...
ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ အတွက် ပေါင်၂ သန်း ဗြိတိန် ကူညီ ...
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်ပေါ် အနေအထိုင် မတတ်သော ပြည်ပ ဧည့်မျာ...
အွန်လိုင်းမှ ဈေးဝယ်နိုင်မည့် ရတနာပုံ Debit ကတ် ထု...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် တည်ထောင...
အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားကွင်း ကို နေလုံ၊ မို...